Sidee inuu ka soo kabsado iMessage ka iPhone
SMS iMessages waa quruxsan fudud via macruufka 9 iPhone, iPad, iPod taabto, iyo Mac. Si kastaba ha ahaatee, si qalad ah la tirtiro iMessage sidoo kale dhaca waqtiga oo dhan. Waxaa kale oo si quruxsan inuu ka soo kabsado iMessages tirtiray? Jawaabtu waa HAA. Waxaa jira saddex siyaabood oo aad u soo ceshano iMessages tirtiray ka iPhone, iPad iyo iPod taabto.
macruufka 9 / iPhone 6s (Plus) iMessage Recovery Software
Siinayaa saddex siyaabood inuu ka soo kabsado iMessages tirtiray ka iPhone 6 (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Si toos ah u soo ceshano iMessages ka iPhone, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud.
Kabsado iMessages tirtiray ay ka mid yihiin waxyaabaha ku jira qoraalka, ku xirnaan iyo emoji.
Taageerada iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus) iyo macruufka dambeeyay 9 buuxda!
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo eegista soo kabsado iMessages in tayada asalka ah.
1: Ladnaansho iMessages tirtiray ka iPhone
2: Ladnaansho iMessages lumay ka Lugood
3: Ladnaansho iMessages hore ka iCloud
Qaybta 1aad: Si toos ah Ladnaansho iPhone iMessages, Simple iyo Fast
Tallaabada 1 Connect aad iPhone (macruufka 9 taageeray) si ay computer ka iyo waxa laga baarayo
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer. Markaas suuqa kala barnaamijka wuxuu noqon doonaa sida soo socota. Waxaad si fudud u riixi kartaa "Start" si ay u iskaan.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo eegista soo kabsado tirtiray iPhone iMessages
Sida tallaabadii u dambaysay ee hab kabashada kor ku xusan. waxa la joogaa wakhtigii si ay ku eegaan iyo hubiyo macluumaadka aad hore hadda. Just hubi mid mid guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Xusuusnow: Baro wax badan oo ku saabsan soo kabsado fariimaha tirtiray ka ah iPhone ( macruufka 9 taageeray), waxaad tagi kartaa: Ladnaansho tirtiray fariimaha iPhone
Qeybta 2: Ladnaansho iMessage waxyaabaha ka gurmad Lugood
Sida aynu wada ognahay in Lugood si toos ah gurmad kartaa xog ku saabsan iPhone, iPad ama iPod taabashada ah, marka aad u hagaagsan u leh. Kadib markii laga badiyay xogta, waxaad si toos ah ugu soo celin kartaa raad raac si aad iPhone. Iyadoo lagu tilmaamayo inuu ka soo kabsado iMessages kaga imaanayo Lugood ah, waxaa jira laba siyood oo aad ka soo xusho: Xulo soo kabsado iMessages ama ka soo kabsadaan gurmad oo dhan.
Soo Celinta via Lugood
Qalabka ay taageerayaan Waayo, kulli iPhone, oo ay ku jiraan 6s iPhone (Plus) Waayo, kulli iPhone
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Lugood gurmad content ka hor soo kabashada;
Xulo soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad ah,
No xogta overwritten on iPhone ah,
Qasaarooyinka Lacag software la version tijaabo ah.
No xushay soo celi,
Overwrites dhammaan xogta ku iPhone.
Download Version Windows , Mac version Lugood
Aan lagu hubiyo sida inuu ka soo kabsado iPhone iMessages ay soo saarida Lugood gurmad ah file in tallaabooyinka. Marka hore, soo bixi version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah.
Tallaabada 1 Warbixiinta file gurmad Lugood
Dhammaan files raad raac ah oo nooca qalab aad si toos ah u la soo daabici doonaa ka dib marka aad soo gashid hab kabashada this (sida uu furmo suuqa kor ku qoran). Dooro mid ka mid ah si aad u iPhone (sida caadiga ah mid ka mid ah la dambeeyay taariikhda gurmad haddii ay jiraan wax ka badan hal), oo guji Start Scan si ay u bilaabaan waxaa soo saarida aad iMessage.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray iMessage ka ​​iPhone
Marka soo saarida ku dhameystiray, content oo dhan file gurmad waxaa lagu soo bandhigay in faahfaahinta. Dooro Messages dhinaca bidix ee suuqa kala, iyo in aad ku eegaan karo waxyaabaha faahfaahsan oo ah fariimaha iyo iMessage. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" button on sare ee suuqa kala, waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer la mid click fudud.
Qeybta 3: Soo Celinta iMessage kaga imaanayo iCloud
Si aad kaga imaanayo iCould soo celin iMessage, waxaad u baahan tahay in la soo celiyo gurmad oo dhan by fikirtid, waxaadse ka iPhone sida qalab cusub oo hore. Haddii aadan rabin in loo sameeyo hab this, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho ku eegaan iyo eegista soo kabsado iMessages aad iPhone.
Tallaabada 1 Orod barnaamijka oo aad soo gasho iCloud
Demi in hab kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado iCloud kaabta File on sare ee suuqa kala barnaamijka.
Marka socda Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, u tag hab kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado iCloud kaabta File on sare ee daaqadda. Markaas barnaamijka aad soo bandhigi doonaan daaqad lagoogu ID Apple aad. Just u sameeyo sidii ay kuu sheegaysaa. Wondershare Qaadataa gaarka ah si dhab ah oo aan la hayn doonaa rikoorka kasta oo ka mid ah.
Tallaabada 2 Download iyo iskaan gurmad iCloud si aad u hesho macluumaadka ku sugan
Marka aad qortey, barnaamijka si toos ah u heli doonaan oo dhan files gurmad in account iCloud ah. Mid aad rabto Dooro iyo riix si aad u soo dejisan. Ka dibna waxaad u iskaan karaa mid click kale.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan iMessages aad iPhone
Skaanka aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah. Marka la joojiyo, waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan xogta laga helay aad gurmad iCloud. Dooro item ee Messages iyo Lifaaq Message. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah oo aad rabto in aad u badbaadin on your computer adigoo gujinaya ku Ladnaansho button.
oo dhan oo ay ku jiraan iPads iPad Air, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad cusub, iPad 2, iPad 1
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado iMessages ka iPhone